Myanmar Web Professional - Web Design, Development and Web Services Group - Special Plan ပင်မစာမျက်နှာ
ဈေးနှုန်းBasic Plan Detail
Special Plan Detail
သဘောတူညီချက်များBasic / Special Plan များအတွက်
ပင်မစာမျက်နှာ » အမျိုးအစား » Special Plan Special Plan
ကျွန်တော် တို့ ၏ Special Plan တွင် Organization | Travel | Media ဟူ၍ Package သုံးခု ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ၏ Special Plan သည် Data များ စဉ်ဆက်မပြတ် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ပြန်ကြားပေးရသော အဖွဲ့ အစည်းများ ၊ ဂျာနယ်များ ၊ မီဒီယာ လုပ်ငန်းကြီးများ ၊ NGO များ ၊ Travel & Tour ကုမ္ပဏီများ ၊ Online Store များ အစ ရှိသည့် Web Site ကို အပတ်စဉ် လစဉ် Update ပြုလုပ် လိုသူ များ အတွက် သင့်တော် သည့် Plan တစ်ခု ဖြစ်ပါသည် ။ Special Plan တွင် လုပ်ငန်း အဖွဲ့ အစည်း အမျိုး အစား ပေါ်မူတည် ၍ ကျသင့် သည့် ဈေးနှုန်းများ ကွဲပြား သွားမည် ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ ၏ package များထဲ မှ Organization package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ပထမ ဆုံး နှစ် အတွက် ငွေကျပ် နှစ်သိန်းး ၊ သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်း ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ Organization Package တွင် web page unlimited page , Hosting , Email တို့ အပြင် အခြား services များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။
200,000 Kyats ( First Year ) , 170,000 Kyats ( Next Year )
Domain , Hosting , Email and other Services
Organization Package သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးများ ၊ NGO များ ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ၊ သင်တန်းကျောင်းကြီးများ . . စသည့် မိမိတို့ လုပ်ငန်း ၏ သတင်းအချက်အလက် များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် လစဉ် Update ပြုလုပ်လို သူများ အတွက် သင့်လျော်ပါသည် ။
အသေးစိတ် ဈေးနှုန်းကြည့်ရန် Travel & Tour Package
ကျွန်တော်တို့ ၏ package များထဲ မှ Travel & Tour package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ပထမဆုံး နှစ် အတွက် ငွေကျပ် နှစ်သိန်း ငါးသောင်း ၊ သက်တမ်းတိုး နှစ်များ အတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်း ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ Travel & Tour Package တွင် web page unlimited page , Domain Name , Hosting , Email တို့ အပြင် အခြား services များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။
Travel & TourPackage
250,000 Kyats ( First Year ) , 170,000 Kyats ( Next Year )
Travel & Tour Package သည် ခရီးသွား လုပ်ငန်း များ အတွက် သီးသန့် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည် ။ Tour Programs များ ၊ လုပ်ငန်း ၏ သတင်း အချက် အလက်များ ကို လစဉ် Update ပြုလုပ် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။
အသေးစိတ် ဈေးနှုန်းကြည့်ရန် Media / Journal Package
ကျွန်တော်တို့ ၏ package များထဲ မှ Media package ကို ၀ယ်ယူပါက တစ်နှစ်စာ အတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်းခုနှစ်သောင်း ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ Media Package တွင် web page unlimited page , Domain Name , Hosting , Email တို့ အပြင် အခြား services များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။
370,000 Kyats ( Per Year )
Media Package သည် ဂျာနယ်များ မဂ္ဂဇင်းများ အတွက် သီးသန့် အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် Update ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။
အသေးစိတ် ဈေးနှုန်းကြည့်ရန် MWP မှ ရေးဆွဲ ထားသော ၀က်ဘ်ဆိုက်များ Copyright © MWP. All rights reserved.
Developed by MWP ( myanmar web professional ).